एन्ड्रोइडमा नि:शुल्क बास्क सिक्नको लागि उत्तम एपहरू एन्ड्रोइडसिस
एन्ड्रोइडमा नि:शुल्क बास्क सिक्नको लागि उत्तम एपहरू
ईडर फेरेनो | 10/04/2022 10:00 | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू
भाषाहरू सिक्नका लागि आवेदनहरू हामीसँग लामो समयदेखि रहेको कुरा हो। प्ले स्टोरमा हामीले यस प्रकारका एपहरूको विशाल चयन भेट्टाउँछौँ, जसले हामीलाई सबै प्रकारका भाषाहरू सिक्न मद्दत गर्छ। हामी पनि भेट्छौं हामीलाई Euskera सिक्न अनुमति दिने अनुप्रयोगहरू। तपाईं एन्ड्रोइडमा बास्क सिक्नको लागि एउटा एप खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि यो मामला हो भने, हामीसँग तलका एपहरूको चयन छ।
बास्क सिक्न को लागी एक सजिलो भाषा हैन। त्यसकारण बास्क सिक्नको लागि एन्ड्रोइड एप राम्रो सहयोग हुन सक्छ, यदि हामी हाल कक्षाहरू लिइरहेका छौं वा यदि हामी निकट भविष्यमा कक्षाहरू लिन सुरु गर्नु अघि आफूलाई तयार गर्न चाहन्छौं भने, उदाहरणका लागि। Google Play Store मा हामीसँग यस भाषालाई मनोरञ्जनात्मक र सरल तरिकामा सुधार गर्न, अभ्यास गर्न र सिक्नका लागि अनुप्रयोगहरूको राम्रो चयन छ। त्यहाँ धेरै छैनन्, तर हामीसँग भएका थोरै उच्च गुणस्तरका एपहरू छन्।
हामीसँग उपलब्ध अनुप्रयोगहरूले विभिन्न कार्यहरू पूरा गर्दछ। किनभने तिनीहरूले हामीलाई सिक्न मद्दत गर्छन् संयुग्मित क्रियाहरू, हामी कसरी वाक्यहरू सिर्जना गर्न सक्छौं, हाम्रो शब्दावली विस्तार गर्न वा शब्द वा वाक्यांशहरू अनुवाद गर्न सक्छौं। त्यसकारण, तिनीहरूले भाषा सिक्ने बेलामा महत्त्वको मुख्य पक्षहरू समावेश गर्दछ, यस अवस्थामा Euskera। तिनीहरू एक राम्रो मद्दतको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्, यद्यपि यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो एक जटिल भाषा हो, त्यसैले हामीले यसलाई साँच्चै मास्टर गर्नु अघि यसले लामो समय लिन सक्छ। त्यसोभए पक्कै पनि त्यहाँ एक छ जसले तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू पूरा गर्दछ जब यो तपाईंको एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेटबाट यो भाषा सिक्ने कुरा आउँछ।
हामीले जम्मा चारवटा फरक-फरक आवेदनहरू सङ्कलन गरेका छौं जुन गुगल प्ले स्टोरमा एन्ड्रोइड फोन र ट्याब्लेटका लागि उपलब्ध छन्। ती मध्ये प्रत्येकले Euskera सिक्न चाहने मानिसहरूलाई राम्रो मद्दत प्रदान गर्दछ। त्यसोभए तपाईंले पक्कै एउटा अनुप्रयोग फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको कुरामा मिल्छ र तपाईंलाई यो भाषा सिक्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यी चार एप्लिकेसनहरू हाल नि:शुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने एप्लिकेसनहरू हुन्, त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न वा तिनीहरूको कार्यहरूको आनन्द लिन पैसा तिर्नु पर्दैन।
फ्रान्सेली भाषा सिक्नको लागि उत्तम Android अनुप्रयोगहरू
1 हिज्केटा एरेदुआज
4 संवाद र यात्रा गर्न बास्क जान्नुहोस्
सूचीमा पहिलो अनुप्रयोग एक राम्रो विकल्प हो जसको साथ तपाईं सक्षम हुनुहुनेछ भाषा बोल्ने र उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यो एउटा एप हो जहाँ हामीसँग विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूबाट विभिन्न प्रकारका कुराकानीहरू उपलब्ध छन्। यो एक चीज हो जसले हामीलाई Euskera को अधिक व्यावहारिक कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नेछ, किनकि यसले हामीलाई वास्तविक जीवन परिस्थितिहरू छोड्छ। थप रूपमा, यसमा विभिन्न एकीकृत कार्यहरू छन्, जस्तै वाक्यांश रूपान्तरण, जसले यसलाई बास्क सिक्न वा धेरै पटक शंकाहरू हटाउन सक्षम हुनको लागि धेरै उपयोगी एप बनाउँदछ।
जब त्यहाँ कुनै वाक्यांश छ जुन हामीले अनुवाद गर्न चाहन्छौं वा यो एक विशेष सन्दर्भमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर जान्न, एपमा एउटा बार हुन्छ जसले हामीलाई त्यसलाई अनुवाद गर्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक वाक्यांशको लागि सामान्यतया फरक परिणामहरू देखाइन्छ, ताकि हामीले त्यो नतिजा छनोट गर्न सक्छौं जुन हामीले दिन चाहेको व्याख्या वा सन्दर्भमा हामीले प्रश्नमा उक्त वाक्यांश प्रयोग गर्नुपर्छ। थप रूपमा, सबै उदाहरणहरू सही छन्, किनकि यस अनुप्रयोगले यसको सबै उदाहरणहरू समीक्षा गरी प्रमाणित गरेको छ बास्क सल्लाहकार परिषद को शब्दावली आयोग। त्यसोभए हामीलाई थाहा छ कि यो यस सन्दर्भमा सधैं राम्रो विकल्प हो, यो अद्यावधिक राखिएको छ र यसले हामीलाई भाषा सही रूपमा सिक्न मद्दत गर्दछ।
एन्ड्रोइडमा बास्क सिक्नको लागि यो राम्रो एप हो। यो अनुप्रयोग गुगल प्ले स्टोर बाट नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ भित्र कुनै पनि प्रकारको खरिद वा विज्ञापनहरू छैनन्, त्यसैले यसलाई प्रयोग गर्दा हामीसँग कुनै अवरोध छैन। यो एक धेरै हल्का एप पनि हो, किनकि यसले तपाईको यन्त्रमा3MB भण्डारण ठाउँ मात्र ओगटेको छ। यदि तपाइँ यसलाई प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
विकासकर्ता: Eusko Jaurlaritza - बास्क सरकार
सूचीमा दोस्रो अनुप्रयोग बास्क सिक्नको लागि अर्को उत्कृष्ट अनुप्रयोग हो जुन हामीले एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्न सक्छौं, किनकि यो एकदम पूर्ण अनुप्रयोग हो। यो केहि हद सम्म अधिक उन्नत स्तर को लागी डिजाइन गरीएको हो, भित्र कूल 36 पाठहरू छन्, ताकि यो अधिक सहन योग्य छ र तपाईंले भाषामा विस्तारै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जहिले पनि चाहेको गति सेट गर्न सक्छौं र राम्रो तरिकाले सिक्न सक्छौं। यो एक ठूलो मद्दत हो किनभने यी इन-एप पाठहरूले धेरै फरक विषयहरू समेट्छ, त्यसैले यो सिक्ने र तपाईंले भविष्यमा वास्तविक जीवनमा त्यो ज्ञान लागू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेर जान्नको लागि यो एक प्रभावकारी तरिका हो, जुन सान्दर्भिक पनि छ।
एपमा रहेका पाठहरू भित्र हामीसँग विभिन्न अभ्यासहरू उपलब्ध छन्। यी अभ्यासहरू डिजाइन गरिएका छन् ताकि हामी लेखन अभ्यास गर्न, वाक्यहरूको संरचना, भाषाका नियमहरू, शब्दहरूको उच्चारण वा व्याकरण सुधार गर्न सक्छौं। हामीले ती पाठहरूमा सिकेका सबै कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने राम्रो तरिका हुनुका साथै। एपको इन्टरफेस प्रयोग गर्न साँच्चै सजिलो छ, ताकि हामी यी पाठहरू र अभ्यासहरू बीच आरामसँग सार्न सक्छौं। यसका अतिरिक्त, हामीले एप भित्र एउटा शक्तिशाली शब्दकोश पनि फेला पार्छौं, जुन भाषा सिक्ने प्रक्रियामा वा हामीले केही सच्याउन वा वाक्यांश वा शब्दको अर्थको बारेमा शंकाहरू हटाउनको लागि अर्को राम्रो मद्दत हुनेछ।
Bagoaz हाम्रो एन्ड्रोइड यन्त्रहरूबाट Euskera सिक्नको लागि एउटा उत्कृष्ट एप हो, जुन हामीले आज भेट्टाउन सक्ने उत्तम मध्ये एक हो। यो एप नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ हाम्रो फोन वा ट्याब्लेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट। एप भित्र कुनै पनि प्रकारको खरिद वा विज्ञापनहरू छैनन्, त्यसैले हामी कुनै पनि पैसा खर्च नगरी सबै गर्न सक्छौं। तपाइँ यसलाई यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
Euskara Hiztegia वास्तवमा एक शब्दकोश एप हो, तर यसले हामीलाई थप कार्यहरूको एक श्रृंखला छोड्छ, त्यसैले यो Euskera सिक्नको लागि अर्को राम्रो सहायता हो। यस शब्दकोशमा हामी मुख्य शब्दहरू र वाक्यांशहरू अनुवाद गर्न सक्षम हुनेछौं जुन हामीले यस भाषामा पहिलो चरणहरू लिन आवश्यक छ, ती जुन सबैभन्दा सामान्य र विशिष्ट छन्। थप रूपमा, यसको भित्र हामीले एक धेरै प्रभावकारी अनुवादक पनि फेला पार्छौं, जसले इन्टरनेट जडान बिना पनि काम गर्दछ। त्यसैले हामी कुनै पनि समय कुनै पनि शब्द वा अभिव्यक्तिलाई सल्लाह दिन सक्छौं जुन हामीले फेला पार्छौं र हामीलाई यसको अर्थ थाहा छैन।
एप भित्र हामीले फेला पार्छौं एक विश्वकोश संग पनि एक राम्रो मद्दत हुनेछ भाषामा विभिन्न पाठहरू सिक्न। यसमा भ्वाइस इनपुट पनि छ (शब्दहरू कसरी उच्चारण गर्ने भनेर जान्नको लागि राम्रो तरिका), यसमा हामीले खोजेका कुराहरूको इतिहास छ र यसले हामीलाई सधैँ हिज्जे र व्याकरण सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले हामीलाई यस भाषालाई चरणबद्ध रूपमा मास्टर गर्न सुरु गर्न मद्दत गर्नेछ, तर हामीले गति सेट गरेकाले हामीलाई उपयुक्त हुने तरिकामा। थप रूपमा, यसको सरल इन्टरफेसको लागि धन्यवाद प्रयोग गर्न सजिलो छ, जुन अर्को पक्ष हो जसले यसलाई ध्यानमा राख्नको लागि राम्रो अनुप्रयोग बनाउन योगदान गर्दछ।
Euskara Hiztegia एन्ड्रोइड मा बास्क सिक्न एक राम्रो अनुप्रयोग हो। यो Google Play Store मा नि:शुल्क उपलब्ध छ। हामी भित्र विज्ञापनहरू छन्, तर तिनीहरू आक्रमणकारी छैनन् वा फोनमा एपको उचित प्रयोगलाई रोक्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू समस्या हुनेछैनन्। तपाइँ यसलाई तपाइँको उपकरणहरूमा यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
विकासकर्ता: बोर्जा डोमेन्गुएज
संवाद र यात्रा गर्न बास्क जान्नुहोस्
सूचीमा अन्तिम अनुप्रयोग सिक्न चाहनेहरूका लागि डिजाइन गरिएको विकल्प हो बास्क देश को यात्रा को लागी केहि Euskera। यदि यो मामला हो भने, यो एप एक ठूलो मद्दत हुन सक्छ। यो एक एप हो जुन यात्रुहरूका लागि Euskera सिक्ने उद्देश्यले हो, तपाइँसँग सूचीमा अन्य एपहरूमा जस्तै भाषामा पूर्ण विसर्जन हुनेछैन, तर तपाइँ ती वाक्यांशहरू, अभिव्यक्ति वा शब्दहरू सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन महत्त्वपूर्ण वा उपयोगी हुन सक्छ। तिम्रो यात्रामा। यो त्यहाँका मानिसहरूसँग राम्रो कुराकानी गर्न वा कसैले भाषा बोलिरहेको बेला बुझ्न सक्षम हुने तरिका हो।
डेन्ट्रो अनुप्रयोगको हामीसँग धेरै कोटीहरू छन्, ताकि हामी प्रत्येक भित्र शब्द, वाक्यांश, प्रश्न वा अभिव्यक्ति सिक्न सक्छौं। यो यस तरिकाले डिजाइन गरिएको हो कि यो ज्ञान हामी प्रत्येक क्षणमा आफूलाई भेट्टाउने परिस्थितिमा निर्भर गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, एप्लिकेसन भित्र हामी शब्दहरू पनि सुन्न सक्षम हुनेछौं, ताकि हामीले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्ने तरिका थाहा पाउनेछौं, जुन कुराले यसलाई सधैं सहज बनाउँदछ र यस क्षेत्रमा हाम्रो सञ्चारलाई मद्दत गर्दछ। । हामीसँग यो भित्र बास्क देशका धेरै ठाउँहरूको बारेमा जानकारी छ, त्यसैले यसले हाम्रो छुट्टीहरूको लागि राम्रो गाइड वा म्यानुअलको रूपमा काम गर्दछ।
अनुप्रयोगसँग इन्टरफेस प्रयोग गर्न सरल छ, सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूको लागि आदर्श। बास्क सिक्न यो एप हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोर मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्। यसको भित्र हामीसँग विज्ञापनहरू छन्, तर तिनीहरूले एपको प्रयोगलाई असहज बनाउँदैनन्। यसलाई निम्न लिङ्कबाट तपाइँको उपकरणहरूमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ:
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » एन्ड्रोइडमा नि:शुल्क बास्क सिक्नको लागि उत्तम एपहरू
हे, त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण हराइरहेको छ!
बास्क Metodoeseyde Berria
ईडर फेरेनो भन्यो
हेर्नुहोस्, मलाई त्यो थाहा थिएन, यो उल्लेख गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!
Eder Ferreno लाई जवाफ दिनुहोस्
अर्को उपकरणमा व्हाट्सएप कसरी क्लोन गर्ने
एन्ड्रोइडका लागि उत्तम PS3 इमुलेटरहरू